My iPhone Agaghị akpọ YouTube Videos. Nke a bụ ihe mere & ndozi! - Iphone
iphone 4s m anaghị akwụ ụgwọ
Abụ m nwa amaala America ma achọrọ m ịjụ ndị mụrụ m
aha njirimara ma ọ bụ paswọọdụ iphone adabaghị
iphone m nwụrụ na ọ gaghị akwụ ụgwọ
IPhone m agaghị egwu vidiyo YouTube! Nke a bụ ihe mere & ndozi.
Were na-aga ikiri vidiyo YouTube na iPhone gị, mana ọ gaghị ebu. Ọ dị oke nkụda mmụọ mgbe YouTube anaghị arụ ọrụ na iPhone gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-anwa igosi enyi gị vidiyo na-atọ ọchị ma ọ bụ gee egwu vidiyo na mgbatị ahụ. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe mere iPhone gị agaghị egwu vidiyo YouTube ma kọwaa esi edozi nsogbu ahụ nke ọma.
YouTube adịghị arụ ọrụ na iPhone m: Nke a bụ Ndozi ahụ!
Gbalịa Rebooting gị iPhone
Tupu ịga n'ihu, gbalịa ịtụgharị iPhone gị ma laghachi azụ. Ighaghachi iPhone gị na-enye ya mmalite ọhụụ ma nwee ike idozi obere nsogbu software, nke nwere ike ịbụ ihe mere iPhone gị agaghị eji egwu vidiyo YouTube.
Iji gbanyụọ iPhone gị, pịa ma jide bọtịnụ ike (nke a makwaara dị ka Sra / Tetanụ bọtịnụ). A red ike na akara ngosi na 'Slide ka ike oyi' ga-egosi na ngosipụta nke gị iPhone. Swipe akara ngosi ike uhie site n'aka ekpe gaa n'aka nri iji gbanyụọ iPhone gị. Chere ihe dị ka ọkara nkeji tupu ịgbanwuo iPhone gị, naanị iji jide n'aka na ọ nwere ohere ịmechi kpamkpam.
Troubleshoot YouTube ngwa
Ọ bụrụ n ’ịmalitegharịrị iPhone gị mana YouTube ka na-adịghị arụ ọrụ, usoro ọzọ bụ dozie nsogbu nwere ike ịbụ site na ngwa ị na-eji ele YouTube. E nwere nza nke free na-akwụ ụgwọ ngwa ọdịnala ị nwere ike iji na-ekiri YouTube vidiyo na gị iPhone, ọ dịghị nke na-zuru okè. Mgbe ihe mebiri, ị gaghị enwe ike ịlele vidiyo YouTube kachasị amasị gị.
Iji chọpụta ma ngwa YouTube gị na-ebute nsogbu ahụ, anyị ga-amalite site na imechi na imeghe ya. Nke a ga - enye ngwa ahụ “do-over” ma ọ bụrụ na ihe adaba mgbe amalitere ya na nke mbụ.
Iji mechie ngwa YouTube gị, bido site na Pịa aka na bọtịnụ Home. Nke a ga-emeghe App Switcher, nke na-enye gị ohere ịhụ ngwa ọ bụla mepere ugbu a na iPhone gị. Swipe ngwa YouTube gị kwụsịrị na ihuenyo imechi ya.
Ọ bụrụ na iPhone gị enweghị bọtịnụ Home, echegbula! Can ka nwere ike ịnweta ngbanwe ngwa. Naanị mepee ngwa YouTube (ma ọ bụ ngwa ọ bụla). Ozugbo ọ mepere, swipe elu na ala nke ihuenyo gi ma unu nile edoziri! Should kwesịrị inwe ike toggle site na-emechi gị ngwa ọdịnala n'otu ụzọ ahụ ị ga- na ihe okenye iPhone.
iphone na -asịkwa enweghị kaadị SIM
Lelee maka mmelite: Enwere Mmelite Maka YouTube App?
Ọ bụrụ na YouTube anaghị arụ ọrụ mgbe ịmechara ngwa ahụ, lelee iji jide n'aka na imelitela ngwa YouTube gị na nsụgharị kachasị ọhụrụ ya. Mmepe na-emelite ngwa ha oge niile iji tinye atụmatụ ọhụrụ ma kwado chinchi ngwanrọ.
Iji hụ ma enwere mmelite maka ngwa YouTube gị, mepee Storelọ Ahịa App. Na-esote, pịa Akaụntụ akaụntụ , gbadaa na Mmelite ngalaba. Ọ bụrụ na mmelite dị, kpatụ anụnụ anụnụ Mmelite bọtịnụ n'akụkụ ngwa ahụ.
Iwepụ Na Weghachi Gị YouTube App
Ọ bụrụ na enwere nsogbu sọftụwia siri ike na ngwa YouTube ị masịrị gị, ịnwere ike ihichapụ ma wụnye ngwa ahụ ọzọ. Mgbe ị na-iwepụ ngwa, niile nke software na ntọala si na ngwa ga-ehichapụ gị iPhone. Mgbe emegharịrị ngwa ahụ, ọ ga - adị ka ị ebudatara ya na nke mbụ.
iphone enweghị ike ịkpọ oku
Echegbula - a gaghị ehichapụ akaụntụ YouTube gị mgbe iwepụ ngwa ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eji ngwa YouTube akwụ ụgwọ dịka ProTube, ị ga-enwe ike ịtinye ya n'efu ma ọ bụrụhaala na ị banyere n'otu Apple ID ị jiri mgbe ị zụrụ ngwa ahụ na mbụ.
Iwepu ngwa ahụ, bido site na ịpị aka na ijide akara ngosi nke ngwa YouTube gị. Gaa n'ihu na ịpị ruo mgbe obere menu pụtara elu na akara ngosi ngwa ahụ. Si ebe ahụ, pịa Hichapụ App , wee gosi ọrụ ahụ site na ịpị aka Hichapụ .
Iji wụnye ngwa ahụ, gaa na Storelọ Ahịa App. Kpatụ Search taabụ na ala nke gị iPhone ngosipụta na pịnye na aha gị họọrọ YouTube ngwa. Kpatụ Nweta , mgbe ahụ Wụnye na-esote gị mmasị YouTube ngwa ka reinstall ya na gị iPhone.
Ọ bụrụ na ị rụnyeghachi ngwa ahụ na YouTube ka na-adịghị arụ ọrụ, nọgidenụ na-agụ maka ndụmọdụ ndị ọzọ!
Edozi nsogbu Wi-Fi nke Na - eme Ka YouTube ghara Ibu
Ọtụtụ ndị na-eji Wi-Fi na-ekiri vidio vidio YouTube na iPhone ha, ọ bụghị ihe a na-ahụkarị maka nsogbu njikọta bụ ihe kpatara vidiyo YouTube agaghị egwu na iPhone gị. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ na - akpata njikọ iPhone gị na Wi-Fi, anyị kwesịrị ịchọpụta ma ọ bụ nsogbu ngwanrọ ma ọ bụ ngwaike.
Ka anyị lebara ngwaike ahụ anya: obere antenna bụ ngwaike ngwaike nke iPhone gị nke nwere ọrụ maka ijikọ Wi-Fi. Poolu a na - enyere gị iPhone aka ijikọ na ngwaọrụ Bluetooth, yabụ ọ bụrụ na iPhone gị na - enwe nsogbu Wi-Fi na Bluetooth n’otu oge, enwere ike nwee nsogbu na mpi ahụ. Agbanyeghị, anyị enweghị ike ijide n'aka ma enwere nsogbu ngwaike, yabụ soro usoro nchọpụta nsogbu sọftụwia n'okpuru!
Gbanyụọ Wi-Fi Ma Gbanye
Nke mbụ, anyị ga-anwa ịgbanye Wi-Fi ma laghachi. Dị ka mbịne gị iPhone anya na azụ, mbịne Wi-Fi na azụ nwere ike dozie a obere software ahụhụ nke nwere ike na-eme a ọjọọ Wi-Fi njikọ.
Iji gbanye Wi-Fi ma laghachi azụ, mepee ngwa Ntọala wee pịa Wi-Fi. Na-esote, pịa ngbanwe dị n'akụkụ Wi-Fi iji gbanyụọ Wi-Fi. Ga-amara na Wi-Fi na-agbanyụ mgbe mgba ọkụ na-acha ntụ. Chere sekọnd ole na ole tupu ịpị mgba ọkụ ọzọ iji gbanwee Wi-Fi.
ozi ederede iphone anaghị eziga
Ọ bụrụ na iPhone gị ka ga-egwu vidiyo YouTube, gbalịa ijikọ na netwọk Wi-Fi dị iche ma ọ bụrụ na ị nwere ike. Ọ bụrụ na YouTube anaghị arụ ọrụ otu netwọk Wi-Fi mana ọ na-egwuri egwu na nke ọzọ, mgbe ahụ enwere ike enwere nsogbu na netwọk Wi-Fi na-adịghị arụ ọrụ, ọ bụghị iPhone gị. Lelee ederede anyị na ihe ị ga - eme mgbe iPhone gị agaghị ejikọ na Wi-Fi maka ndụmọdụ ndị ọzọ!
Lelee Ọnọdụ Server YouTube
Tupu ịgafe na nchọpụta nsogbu ikpeazụ, lelee ọnọdụ ngwa ngwa na ọnọdụ nke sava YouTube. Mgbe ụfọdụ, sava ha ga-ada ma ọ bụ na-eme mmezi oge niile, nke nwere ike igbochi gị ikiri vidiyo. Lelee ọnọdụ nke sava YouTube ma hụ ma ọ bụrụ na ha bilie ma na-agba ọsọ. Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ na-akọ nsogbu, mgbe ahụ ndị sava nwere ike ịda!
Mgbe ịtọgharịa ntọala ntọala, ntọala Wi-Fi, Bluetooth, na VPN (Virtual Private Network) ga-ehichapụ ma tọgharịa ya. O nwere ike isiri ike ịchọta ihe kpatara nsogbu ngwanrọ, yabụ kama ịchụ ya, anyị ga-ehichapụ ma tọgharịa ntọala ntọala netwọ iPhone gị niile.
Cheta: Tupu ịtọgharịa ntọala netwọk gị nke iPhone, dị njikere ịdebanye okwuntughe Wi-Fi gị niile! Ga-enyerịrị ha ozugbo ozugbo nrụzigharị zuru ezu.
Iji tọgharịa ntọala netwọk, bido site na imeghe ngwa Ntọala. Pịa General -> Tọgharia -> Tọgharia Ntọala Ntọala. A ga-akpali gị ịbanye passcode gị, wee gosi na ị chọrọ ịtọgharịa ntọala netwọk gị iPhone. Gị iPhone ga-reboot ozugbo nrụpụta zuru ezu.
YouTube Na-arụ Ọrụ Na iPhone Gị!
YouTube na-arụ ọrụ na iPhone gị ma nwee ike ilele vidiyo vidiyo kachasị amasị gị ọzọ. Jide n'aka na ịkekọrịta isiokwu a na mgbasa ozi mmekọrịta ka ndị enyi na ndị ezinụlọ gị mara ihe ị ga-eme mgbe iPhone ha agaghị egwu vidiyo YouTube. Daalụ maka ịgụ isiokwu a, ma hapụ azịza n'okpuru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịjụ anyị ajụjụ ọ bụla gbasara iPhone gị!